Soomaalidii Hore – Kaasho Maanka
Waxa ay soomaalida qaarkood sheegaan in ay soomaalidii hore ahaayeen dad doodaha iyo xubinta hadalka hela oo garaha iyo arrimaha geed hoostiis ku dhammaysta, laakiin ay ummaddu gadaal ka soo xumaadeen. Sidaas in ay ahaan jirtey shaki weyn baa ku jira oo in ay dadka wax u kordheen mooyi ee wax in ay ka lumeen i la ma aha. Anigu waxa aan ahay reer miyi, baadiyahana in sidii ay dadku ahaan jireen ay wax weyni iska beddeleen u malayn maayo. Bal i la eega sida ay soomaalida oo dhammi u doodaan tusaale ku saabsan. Metelan saddex nin baa isu yimid, mid baana yiri;
“Soomaalidu waxa ay u baahan yihiin in ay nabad helaan, ka dibna aqoonta xoogga la saaro si dadka wacyigooda kor loogu qaado”.Mid labaad baa la soo boodey;
“Maxaannu kaa la hadlaynaa qaad/jaad ayaad cuntaaye? Midda kale gabadhaada gabdhaha ugu weyni suuqa ayey ku jirtaa oo niman baa iska wadwata”.
Midkii hore ayaa hadalkii ku soo laabtay oo yiri
“Aniga iyo qoyskayga ha ka hadlin ee arrinta aynu ka doodayney hadalkaaga ku koob oo mawduuca ha ka bixin!”.
Midkii saddexaad baa hadalkii soo galay isaga oo kaas u jawaabaya, waxa uuna yiri;
“Waa runtiis ee qaadka iska daa, midda kale gabadhaada cesho! Ninkani waa uu kuu nasteexeeyey”.
Midkii doodda soomaalida ku saabsan bilaabay xoogaa xanaaq ah baa wajigiisa laga dareemay, waxa uuna yiri;
”Nimanyohow shakhsiyaddayda iyo carruurtayda maxaa idin ka galay maad ka dooddaan arrinta guud oo ina wada khusaysa?”.
Labadii kale mid ka mid ah baa la soo boodey
”Alla muxuu Ilaahay i noo nimceeyey! Mar kasta oo aan taraawiix tukado ajarka ka sokow caafimaad baan dareemaa”.
QORMO LA XIRIIRTA: Baratanka Alshabaab
Mid kale ayaa isaga oo in uu jawaabaya isu arka yiri;
”Mid walaalkay ahi waa uu labaystay, aniguna naagtii hore ayaan weli ku koob nahay”.
Midkii arrimaha soomaalida ka dooday maskax wareer buu dareemay, waxaana isaga oo sida uu hadalku u ka la daatay ka xun su’aal weydiiyey mid kale oo yiri;
”Waryaa bal noo warran adiga ayaa idaacadaha gaalada dhegaystee!”.
Waxa uu damcay in uu jawaabo, laakiin nasiib darro midkii su’aasha weydiiyey waa uu iska dhaqaaqay isaga oo aan is ogeyn in uu nin wax weydiiyey. Waxa uu sii socdey meel toban tillaabo jirta.
Tusaalahaas waxa aan u soo qaatay sida ay soomaalidu u doodaan iyo sida ay u sheekaystaan. Kow qofka soomaaliyeed ma uu fahmi karo in uu isku koobo waxa ay doodda ama sheekadu ku saabsan tahay. Labo markii arrin guud laga hadlayo iyaga ayaa is caaya oo qofku waxa uu dabaashaa qofka uu la hadlayo duruufihiisa iyo arrimaha u gaarka ah. Saddex xusuusta qofka soomaaliyeed uu wax isku xiraa aad bay u liidataa oo waxaa laga yaabaa inta uu su’aal keeno markii loo jawaabi lahaa in uu tago ama uu sheeko saddexaad oo hor leh furo.
Meesha waxaa ku jirta in ay soomaalida cawaannimo ku jirto oo aysan degganayn, hadalna wadaagi karin. Marka ay sheekaysayaan ixtiraam isu ma hayaan oo qofka soomaaliga ahi ma uu awoodo in qofka uu la hadlayaa uu ka nabad galo. Xadka ay shakhsiyaadku ka la leeyihiin oo dhan baa dunsan dhaqanka soomaalida. Rabbi jannada waxa ugu muhiimsan oo uu ka sheegay waa in ay dadka joogaa is xushmeeyaan, oo aysan hadallo laqwi ah ku haasaawin. Xushmadda waxaa ugu weyn in aad qofka ku la hadlaya dhegaysatid, ka dibna aad hadalkiisa tixraacdid ee aadan meel kale u boodin.
Shirarkii dibuheshiisiinta ee soomaalida qaar baa labo sano socdey, wax kalena ma aha sababtu ee soomaalidu waysan hadli aqoon. Waa been in ay soomaalidu dad hadal nuxur leh ku dooda ahaan jireen, ee waxaa run ah in ay jiri jireen qofqof maansooda. Taariikh been ah yaan lagu faanin meesha dad ku ma haynee!
cabdi x a kiim
Ar somalida dhibaataa iskaga dhacdee allahh haka saaro
W/Q: Shaafici Xasan Maxamed 15th February 2018